people Nepal » अब १९ गते बैठकमा के हुन्छ, यसो भए मान्छ मोर्चा ? अब १९ गते बैठकमा के हुन्छ, यसो भए मान्छ मोर्चा ? – people Nepal
अब १९ गते बैठकमा के हुन्छ, यसो भए मान्छ मोर्चा ?
काठमाडौं – संशोधनमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेमा ती प्रस्तावमा दफाबार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न पाउने नियम छ । तर, विशेष समिति बनाएर दफाबार छलफल गर्दा अन्योल लम्बिने स्थिति छ । त्यसैले सभामुखले विशेष समिति बनाउने वा नबनाउने निर्णय गरेकी छैनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।